Fianarana AutoCAD - Pejy 2 - Geofumadas
TOKO 7: ZAVA-MAHADOMELINA
Ny zavatra tsirairay dia misy andian-toetra mamaritra azy, manomboka amin'ny toetra maha-geometrika azy, toy ny halavany na ny taribeny, hatrany amin'ny toerana misy ny fiaramanidina Cartesiana misy ny hevi-dehibe ao aminy. Autocad dia manolotra fomba telo ahafahantsika mijery ireo toetran'ny zavatra ary manitsy azy ireo mihitsy aza. Na dia lohahevitra iray aza ...
6.7 Ary aiza ny baiko anglisy?
Raha nanontany tena ianao tamin'io fotoana io, marina ny anao, tsy nilaza momba ireo baiko mitovy amin'ny anglisy izay nohamarininay tato amin'ity toko ity izahay. Andao hojerentsika izy ireo amin'ity horonan-tsary manaraka ity, saingy andao hanararaotra milaza izany rehefa mampiasa baiko manana bokotra eo amin'ny kofehy isika, ny fitoviana ...
Mbola misy karazana singa mitambatra hafa izay azontsika foronina amin'ny Autocad. Momba ireo faritra ireo. Ny faritra dia faritra mihidy izay, noho ny endrik'izy ireo, dia fikajiana ny fananana ara-batana, toy ny ivon'ny hery misintona, noho izany amin'ny tranga sasany dia mety kokoa ny mampiasa ireo karazana zavatra ireo fa tsy polyline ...
Ny propellers ao amin'ny Autocad dia zavatra 3D indrindra izay ampiasaina hitaona loharano. Miaraka amin'ny baiko hamoronana zavatra mafy orina dia mamela anao hisintona loharano sy tarehimarika mitovy amin'izany izy ireo. Saingy, amin'ity fizarana ity natokana ho an'ny habaka 2D, ity baiko ity dia ilaina amin'ny famolavolana spiral. Raha mitovy ny taribia fanombohana sy ny tadin'ny fiafarana, dia ...
Ireo mpanasa lamba araka ny famaritana azy dia faribolana vy boribory misy perforation eo afovoany. Ao amin'ny Autocad dia toy ny peratra matevina izy ireo, na dia arcs boribory roa aza izy io miaraka amin'ny hateviny voafaritra amin'ny sanda savaivony anatiny sy ny lanjan'ny savaivony ivelany. Raha mitovy amin'ny zero ny savaivony anatiny, ...
Ny rahona fanitsiana dia tsy inona fa ny polyline mihidy noforonin'ny arcs izay ny tanjony dia ny hanasongadinana ny ampahany amin'ny sary izay tianao hisarihana ny saina haingana ary tsy misy fiahiahiana firy ny maha marina ny faritra ao aminy. Anisan'ireo safidinao azonay atao ny manova ny halavan'ny ...
Amin'ny lafiny iray, ny splines dia karazana curve malamalama izay noforonina mifototra amin'ny fomba voafidy handikana ireo teboka izay aseho eo amin'ny efijery. Ao amin'ny Autocad, ny spline dia faritana ho "Nonuniform Rational Bezier-spline Curve" (NURBS), izay midika fa ny fiolahana dia tsy ...
Ny polylines dia zavatra vita amin'ny tsanganana tsipika, arcs, na fitambaran'izy roa. Ary na dia azontsika atao aza ny manoritra tsipika sy arcs tsy miankina izay manana ny fiandohany ho toy ny teboka farany amin'ny tsipika na tsipika hafa, ary amin'izany mamorona endrika mitovy, ny polyline dia manana tombony fa izy rehetra ...
TOKO 6: LOHATENY COMPOSITE
Antsoina hoe "zavatra mitambatra" ireo zavatra azontsika sintomina ao amin'ny Autocad saingy sarotra kokoa noho ireo zavatra tsotra nodinihina tao amin'ireo fizarana tamin'ny toko teo aloha. Raha ny marina, ireo dia zavatra izay, amin'ny tranga sasany, dia azo faritana ho fitambaran'ny zavatra tsotra, satria ny géometry dia fitambaran'ny ...
5.8 Ireo teboka amin'ny perimeter misy zavatra
Andao hiverina ny lohahevitra nanombohantsika an'ity toko ity. Raha tsiahivina dia mamorona teboka fotsiny izahay amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo fandrindrana azy eo amin'ny efijery. Nolazainay ihany koa fa amin'ny baiko DDPTYPE dia afaka misafidy fomba isa hafa aseho isika. Andao isika hijery safidy roa hafa amin'ny famoronana teboka amin'ny perimeter amin'ny zavatra hafa. Ireo teboka ireo matetika ...
Araka ny fantatry ny mpamaky azy, ny polytre dia polygon mahazatra satria mitovy ny refy amin'ny lafiny efatra. Misy koa pentagon, heptagon, oktagon sns. Ny fanaovana sary polygons mahazatra miaraka amin'ny Autocad dia tena tsotra: tsy maintsy fararantsika ny teboka afovoany, avy eo ny isan'ny sisiny hananan'ny polygon (mazava ho azy, arakaraka ny haben'ny lafiny ...
Raha lazaina amin'ny fomba hentitra, ny ellipse dia endrika manana ivon-toerana 2 antsoina hoe foci. Ny habetsaky ny elanelana isaky ny teboka amin'ny ellipse mankany amin'ny iray amin'ny foci, miampy ny elanelana avy amin'io teboka io ka hatrany amin'ny iray hafa, dia hitovy amin'ny isa mitovy amin'ny teboka hafa amin'ny ellipse. ...
TOKO 3: FITSARANA SY COORDINATES
Efa niresaka izahay fa miaraka amin'ny Autocad dia afaka manao sary isan-karazany isika, manomboka amin'ny drafitra maritrano amin'ny tranobe iray manontolo, hatramin'ny sary amin'ny faritra misy ny milina mitovy tsara amin'ny an'ny famantaranandro. Izany dia mametraka ny olan'ny refy fandrefesana izay ilain'ny iray na ny iray hafa. Raha misy sarintany afaka ...
2.12.1 Miova ny interface tsara
Te hanandrana ve ianao? Olona sahy ve ianao izay tia manodikodina sy manova ny tontolo iainanao mba hanaingoanao azy manokana? Tokony ho fantatrao amin'izay fa ny Autocad dia manome anao ny mety hanovana tsy ny loko amin'ny programa, ny haben'ny cursor-nao ary ny boaty fifantenana, araka ny efa noresahintsika teo, fa ...
2.12 Interface Customization
Holazaiko aminao zavatra izay efa ampoizinao angamba: ny interface interface Autocad dia azo ovaina amin'ny fomba samihafa hanamboarana ny fampiasana azy. Ohatra, azontsika atao ny manova ny bokotra totozy ankavanana mba tsy hiseho intsony ny menio ny toe-javatra, afaka manova ny haben'ny cursor na ny loko eo amin'ny efijery isika. Na izany aza, ity dia ...
Araka ny nohazavainay tao amin'ny fizarana 2.2, ao amin'ny bara fidirana haingana dia misy menio mandatsaka izay manova ny interface eo anelanelan'ny sehatr'asa. Ny "Workspace" dia andiana baiko namboarina tamin'ny kofehy izay miompana amin'ny asa manokana. Ohatra, ny sehatr'asa “2D Drawing…
Previous page pejy 1 pejy 2 pejy 3 Next pejy